WaterMinder, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
WaterMinder, yemahara kwenguva shoma
Rimwezve zuva, kumwe kunyorera kwatinogona kurodha mahara kwenguva yakati rebei. Ino nguva isu tinotaura nezve chikumbiro chine chekuita nehutano hwedu: WaterMinder. Ichi chishandiso, sezvo iwe uchigona kufungidzira kubva kuzita, iko kunyorera kunoenderana neApple Watch iyo achatiyeuchidza kunwa mvura, uye kana tadaro Tinofanira kusimbisa ziviso kuitira kuti nguva dzose iwe uzive huwandu hwemvura dzatinonwa kuti tigare tiine hydrated. WaterMinder ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye 2,99 euros, asi kwenguva shoma inowanikwa kuti utore mahara.
WaterMinder ichatiyeuchidza nguva nenguva kuburikidza nezviziviso pane ese Apple Watch uye iyo iPhone kuti inguva yekunwa. Iko kunyorera kunoenderana nehuremu hwedu kukurudzira huwandu hwemvura kuti tinofanira kunwa kuti tisvike pazvinangwa zvedu zvezuva nezuva. Kutenda kumagrafu uye zvikamu zvinoratidzwa nechishandiso, isu tinoziva nguva dzese kuti yedu hydration level chii.
Kunwa mvura kwagara kuchikurudzirwa, kunyanya pakati pevanhu vakafutisa, nekuti kubudikidza neweti chikamu chemafuta chatinodya zuva nezuva uye neaya akachengetwa nemuviri anodzingwa. Inobatsirawo itsvo dzedu kushanda zvishoma. Asi isu hatigare tichirangarira chisungo chekunwa mvura kana tichida kuchengetedza muviri wedu uine hutano.
WaterMinder inosangana neHealthKit kuti tiwane huremu hwedu, murume nemurume uye zuva rekuzvarwa kuitira kuti titarise yatinokurudzirwa muyero wezuva nezuva wemvura. Icho hachisi chikumbiro chinotipa isu ruzivo nezve hutano hweduZvinongotiyeuchidza kuti mvura yekunwa yakakosha kumuviri wedu, uye zvakare haina kukuvadza, kunyangwe mvura yakadhakwa zvakadii. WaterMinder iri muchiSpanish, inoenderana neiyo iPhone, iPad, iPod touch uye Apple Watch. Iyo inobata 90 MB uye ine avhareji chiyero cheazvino vhezheni yenyenyedzashanu
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » WaterMinder, yemahara kwenguva shoma
Yalu Jailbreak iOS 10.2 Source Code (Isina kukwana) Zvino Yava Kuwanikwa
Kwete, iOS 10.2.1 zvakare haigadzirise iPhone bhatiri nyaya